Everton oo isha ku heysa Qadka dhexe ee kooxda Juventus Adrien Rabiot. Horyaalka Ingiriiska
Home Horyaalka Ingiriiska Everton oo isha ku heysa Qadka dhexe ee kooxda Juventus Adrien Rabiot.
Everton oo isha ku heysa Qadka dhexe ee kooxda Juventus Adrien Rabiot.
Kooxda ka dhisan gobolka Mersiyedka ee Everton ayaa xiriir la sameeysay ciyaaryahanka khadka dhexe ee wadanka Faransiiska iyo kooxda Juventus andre Rabiot sida ay qorayaan waregeystada kasoo baxa wadanka talyaaniga gaar ahaan wargeyska. (Il Bianconero)
Kooxda Serie A ayaa dalbanaya lacag dhan 30 milyan euro oo ay ku qiimeeyaan xidiga qadka dhexe iyadoo kooxda Everton ay xiriir la sameysay Adrien Rabiot oo ku saabsan suurtagalnimada xagaaga soo aadan ula wareegaan.
Toffees ayaa ka dhigtay ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Juventus bartilmaameedkooda ugu sarreeya ee suuqa kala iibsiga xagaaga laakiin Bianconeri ayaa heysata ku dhawaad 30 milyan euro (£ 26m / $ 36m). Everton ayaa sidoo kale isha ku haysa xidiga kooxda Roma Gianluca Mancini
Previous articleMauricio Pochettino oo ka hadlay mustaqbalka Xidiga Farance iyo PSG Kylain Mbappe.
Next articleKooxo badan oo isku heystaan mustaqbalka Qadka dhexe dunida Eduardo Camavinga